Ukuguqula iiAirports kwiiBillion zeDola ngamathuba emali kwizixeko zase-US
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Ukuguqula iiAirports kwiiBillion zeDola ngamathuba emali kwizixeko zase-US
isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • uthutho • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ubhubhane we-COVID-19 ubeke uxinzelelo olutsha kwezemali kurhulumente othile nakwezasekhaya. Esinye isixhobo esinokubanceda bakwazi ukujongana nale ngxaki sibizwa ngokuba “yinkqubo yokwenza imali ngeeasethi,” maxa wambi ekubhekiswa kuzo njenge “recrasource recycling.” Njengoko iqhutywa yi-Australia kunye neqaqobana lolawulo lwase-US, umbono kukuba urhulumente athengise okanye aqeshise ii-asethi ezivelisa ingeniso, evule amaxabiso asethi ukuze isetyenziselwe ezinye iinjongo eziphambili zoluntu.
Ngokusekwe kwidatha evela kwintengiso yesikhululo seenqwelomoya sangaphambili kunye nexesha elide lokuqeshisa kwihlabathi liphela, isifundo sibonisa ukuba nje eHawaii ezona zikhululo zeenqwelo moya zinkulu zinokuxabisa ukuya kuthi ga kwi-3.6 yezigidigidi zeerandi zidityaniswe ngokuqeshisa ixesha elide kwiinkampani zabucala zesikhululo seenqwelomoya kunye nabatyali mali, IPHEPHA fokanye umzekelo.
Uphononongo lufumanisa ukuba eHawaii kuphela i-Honolulu's Daniel K. Inouye International Airport inokuvelisa i-2.7 yezigidigidi zeedola kwaye iKahului Airport eMaui ingafumana i-935 yezigidi zeedola ngokuqesha ixesha elide.
Nangona kunjalo, izikhululo zeenqwelomoya zingaphezulu kwe- $ 2.5 yezigidigidi ematyaleni. Emva kokuhlawula iibhondi zikarhulumente kwisikhululo senqwelomoya, njengoko kufunwa ngumthetho wobumbano njengenxalenye yayo nayiphi na into yokuqeshisa, imali yelizwe evela kwisivumelwano sokuhlala ixesha elide kwizikhululo zeenqwelo moya ezimbini ziya kuba malunga ne- $ 1.1 yezigidigidi.
Ngaphantsi kwemigaqo yase-US yenqwelo moya, abanini zikarhulumente kwisikhululo seenqwelomoya abavumelekanga ukuba bafumane nayiphina ingeniso yomrhumo; yonke ingeniso enjalo kufuneka igcinwe kwisikhululo seenqwelomoya kwaye isetyenziselwe iinjongo zesikhululo seenqwelomoya. Phesheya kolwandle, akukho zithintelo. Kule minyaka ingama-30 idlulileyo, oorhulumente abaninzi baye babambisa okanye babambisa bucala izikhululo zeenqwelo moya ezinkulu neziphakathi kwaye bafumana izibonelelo zemali ngqo ngokwenza njalo.
Kwi-2018, njengenxalenye yomthetho wokugunyazisa ukulawulwa kweenqwelo moya, iCongress yenze okwahlukileyo kuthintelo ekudala lukhona. INkqubo entsha yoBambiswano kuTyalo-mali kwiSikhululo seeNqwelo-moya (AIPP) yenza ukuba abanini zikarhulumente kwisikhululo seenqwelomoya bakwazi ukungena kwimvumelwano yokuqeshisa intsebenziswano phakathi kukarhulumente namashishini abucala (P3) -kwaye basebenzise ingeniso yemali-mboleko ukulungiselela iinjongo zikarhulumente ngokubanzi.
Olu phononongo luphonononge amandla eqeshiso kwisikhululo senqwelomoya phakathi kwabucala nakwabucala kwizikhululo zeenqwelo moya ezingama-31 ezinkulu neziphakathi eziphantsi kwesixeko, isithili kunye noorhulumente. Itsalela idatha evela kwisikhululo senqwelomoya sabucala-sabucala sentengiselwano yokuqeshisa kwintengiselwano kwiminyaka yakutshanje ukuqikelela ukuba sisiphi na isikhululo seenqwelomoya sama-31 esinokubaluleka kubatyali mali.
Ixabiso elipheleleyo linokubaluleka kwisikhululo seenqwelomoya kwindawo yentengiso yehlabathi. Uqingqo-maxabiso lulonke luthathela ingqalelo ikhowudi yetax yase-US efuna ukuba ihlawulwe iibhondi zesikhululo seenqwelo-moya kwimeko yotshintsho kulawulo, njengokuqeshiswa kwexesha elide. Yiyo loo nto ke ixabiso eliqikelelweyo ngexabiso elipheleleyo lisuswe kwixabiso leebhondi zesikhululo seenqwelomoya.
Kuba ukuqeshiswa kwe-P3 kwezikhululo zeenqwelo moya akuqhelekanga eMelika (umzekelo okhoyo kuphela yiSan Juan, isikhululo seenqwelomoya sasePuerto Rico), isifundo sichaza iindidi ezintathu zabatyali mali kwizikhululo zeenqwelo moya zaseMelika.
Okokuqala indalo iphela ekhulayo yeenkampani zezikhululo zeenqwelomoya, kubandakanya amaqela ehlabathi amakhulu amahlanu, asebenza ngesabelo esikhulayo sezikhululo zeenqwelomoya ezinkulu ngengeniso yonyaka.
Eyesibini yimali yotyalo-mali lweziseko zophuhliso, ethe yanyusa amakhulu ezigidi zeedola ukutyala imali njengembuyekezo kwizibonelelo ezizimeleyo nezabucala eziqeshwe yi-P3 kwihlabathi liphela.
Udidi lwesithathu yingxowa-mali yomhlala-phantsi kawonke-wonke, ethi ngokuthe ngcembe yandise utyalo-mali lwabo kwiziseko zophuhliso ngeenzame zokubuyisela umva ukuhla kumyinge wabo wokubuyela kutyalo-mali.
Zonke ezi ntlobo zintathu zabatyali zimali zinexesha elide kwaye zikhululekile ukutyala imali kunye nokuphucula ngakumbi ezi ntlobo zeeasethi.